राती फोन गर्छु है ! भन्ने टाइटलमा नेपाली कमेडी भिडियो ‘टाईम पास’को भाग १५ सार्वजनिक (भिडियो सहित् ) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/राती फोन गर्छु है ! भन्ने टाइटलमा नेपाली कमेडी भिडियो ‘टाईम पास’को भाग १५ सार्वजनिक (भिडियो सहित् )
राती फोन गर्छु है ! भन्ने टाइटलमा नेपाली कमेडी भिडियो ‘टाईम पास’को भाग १५ सार्वजनिक (भिडियो सहित् )
काठमाण्डौँ- मात्रृका पौडेल र सिसिर बुढाथोकीको निर्देशनमा तयार भएको नेपाली संक्षिप्त टेलिसिरियल टाईम पासको भाग १५ युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको छ । युटुब च्यानल राष्ट्रियता टिभीले यसलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
यसका नयाँ नयाँ भागहरु लाई पूर्वकै एकदम सफल छोटो टेलिचलचित्र मानिएको छ । दर्शकहरुको मनोरन्जनको लागि युट्युब च्यानल राष्ट्रियता टिभीले बिभिन्न प्रकारका कमेडी भिडियोहरु अपलोड गर्ने क्रममा टाईम पासको १५ भाग सार्बजनिक गरेको हो ।
उक्त भिडियोमा ईस्वर दुलालको सहायक निर्देशन रहेको छ । भिडियोमा मात्रृका पौडेल र सिम्रन लिम्बुको अभिनय रहेको छ । भिडियोमा कलाकारहरुले यो सानो प्रसंगलाई निक्कै कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरेर दर्शकहरुलाई मनोरन्जन दिने प्रयास गरेका छन ।
ब्रेकिङ न्युज: फेसवुक लाइभमा आएर २३ वर्षकी युवतीले यसरी लगाइन् पा’सो (भिडियो हेर्नुस्)
दु’र्घटना लगत्तै ‘आज मेरो दु:खको दिन रैछ’ भन्दै भाग्य न्यौपाने आए फेसबुक लाइभ(हेर्नुस भिडियो )